18% no vola voaangona ho amin’ny fifandraisan-tànana – FJKM Ambavahadimitafo 18% no vola voaangona ho amin’ny fifandraisan-tànana |
Misaotra an’Andriamanitra isika fa afaka miroso hatrany amin’ny fanomanana ny fifandraisan-tànana eo amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain mivady sy ny fiangonana @ zoma 4 sy alaady 6 desambra 2020.
Ny 18%-n’ny vola no eo am-pelatànan’ny komity ankehitriny ka manana alahady dimy isika hanatrarana ny tanjona 50 millions Ariary izay napetraka.
Izany vola izany dia hoentintsika hampitaovana ny mpitandrina Randrianarisoa Alain mivady amin’ny iraka izay anirahan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fiangonana azy ireo ny amin’ny fitoriana ny Filazantsara an’i Jesoa Kristy.
Amin’ny Alahady 01 novambra 2020 no hanaovantsika jeri-todika ny tomban’ezaka ny amin’izay rehetra asa vita. Hisy koa ny rakitra manodidina izay arotsaka manontolo ho an’ny komitin’ny fifandraisan-tànana.
Manentana antsika handray anjara araka izay hitarihan’ny Fanahy Masina antsika. Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra, ary ho amintsika ny fiadànana.